Anyị Kacha Mma Ime Email Opt-Na Strategy Mgbe | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 21, 2016 Mọnde, Febụwarị 22, 2016 Douglas Karr
My ahịa Podcast onye otu, Erin Sparks, nwere mmasị inye m nsogbu oge gbasara atụmatụ opt-in anyị Martech Zone. Tupu anyị ekwuo maka ihe anyị nwalere na ihe arụ ọrụ, ekwesịrị m ịkọwa mkpa email. Ọ bụrụ na ị na-elele akwụkwọ dị n'ịntanetị dị ka akụrụngwa, ijide adreesị ozi-e - dị nnọọ - ụzọ kachasị mma nke iweghachi ndị ọbịa dị mkpa laghachi na saịtị gị.
N'ezie, aga m ekwu na listi adreesị email gị bụ usoro kachasị dị egwu na ntanetị nke saịtị gị nwere. Ọ bụ ya mere anyị ji wuo nke anyị ọrụ email maka WordPress. Ihe ndenye aha gị na-eto eto na saịtị gị bụ kacha mma metric maka ịmata ahụike na njikọ aka nke ọdịnaya gị. Mgbe onye ọbịa debanyere aha gị ma nabata gị na igbe mbata ha (nke nwere ike zuru ezu), ọ pụtara na ha tụkwasịrị obi na nzukọ gị na-eweta.
Anyị anwalewo ton nke ngwaọrụ dị iche iche iji gbalịa weghaara adreesị ozi-e nke ndị ọbịa anyị maka akwukwo ozi anyi - mana rue ugbua, obu nani otu emeela nke oma. Chọpụta, anyị na-enweta ọtụtụ adreesị email ebe a na ngwaọrụ ndị anyị ji. Anyị na-eji obi eziokwu ezere atụmatụ iji rata ndị ọbịa ịdenye aha ha dị ka ebe a na-ekpo ekpo na ịkwụ ụgwọ. Anyị chọrọ ezigbo ndị debanyere aha bụ ndị debanyere aha n'ihi na ha ghọtara uru anyị wetaara ha. Akwụkwọ akụkọ anyị na-enye ọtụtụ ọdịnaya maka ndị na-ere ahịa na azụmaahịa na nyocha, chọpụta ma mụta otu esi eji teknụzụ azụmaahịa iji melite nsonaazụ azụmaahịa.
A nnabata ute bụ peeji peeji zuru ezu nke na-egosi maka ndị ọbịa ọhụrụ, na-agbanye saịtị ahụ na ibe ahụ, wee jụọ onye ọbịa ahụ ka ị denye aha ya. Na saịtị anyị, ọ dị ka nke a:
Ọ naghị arụ ọrụ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na atụmatụ ndị ọzọ ga-eme ka anyị nwee ndị debanyere aha iri na abụọ n'ọnwa, Nnabata Nnabata anyị na-ewetara anyị ndị debanyere aha iri na abụọ kwa ụbọchị. N'ezie, otu ụbọchị anyị nwere ihe karịrị ndị debanyere aha 100 nwepu aha. Ihe nnabata anyị na-agbanwe oge 100 karịa usoro ọ bụla anyị debere.
N’adịghị ka popup na - egbochi mmadụ ma ọ bido ịmalite ịgụ ya, usoro a gwara ha ka ha denye aha tupu ha ebido. Ọ bụrụ na ha achọghị, ha ga-asị mba ma ọ bụ gbadaa ihu na peeji ahụ. Ikpo okwu na-enye anyị ohere igbu oge na-egosi opt-in ọzọ. Na anyị nwere ike nwalee nsụgharị dị iche iche site na iji toolset kwalite iji hụ ma onye arụ ọrụ karịa nke ọzọ.
Too gị na ebe nrụọrụ weebụ na-eduga na SumoMe
The Nabata Mat bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ngwa ọrụ na arụmọrụ iji bulie ọnụọgụ weebụsaịtị gị. SumoMe arụnyere ngwaọrụ okporo ụzọ ugbu a ma hazie na weebụsaịtị 200,000! Nke kachasị mma - ikpo okwu na-enye ihe karịrị iri na abụọ ngwaọrụ iji nyere gị aka ịmegharị mgbanwe na ịbawanye arụmọrụ saịtị gị.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na saịtị WordPress, SumoMe na-enyekwa WordPress Plugin iji mee ka ịmalite. SumoMe nwekwara ngwa mgbakwunye Chrome, na-eme ka ịnweta ngwa ọrụ ha dị mfe dị ka ịpị bọtịnụ. Nke kachasị, ha na-agbakwunye ụzọ ọhụụ iji bulie listi email gị, gbaa ndị mmadụ ume ịkekọrịta, ma tụọ arụmọrụ saịtị gị site na nke ha nchịkọta ngwaọrụ.
Anyị na SumoMe rụkọrọ ọrụ iji bido ịmalite - debanye aha ugbu a maka ịnweta ngwaọrụ iri na abụọ na enweghị ọnụ!
Gbalịa SumoMe n'efu!
BigCommerce na-ewepụta 67 E-commerce ọhụrụ
Obinna Dike (@renuchie)
Feb 22, 2016 n’elekere 9:15 nke abali
Ezigbo ọrụ Douglas. M pịrị njikọ ahụ na Twitter ma jide n'aka na enwere ekele site na nnabata nnabata ị gara n'ihu ide banyere. Ọ naghị adabara n'ụzọ ọdịnaya m nọ ebe ahụ ịhụ mana ọ ka na-ahụ anya nke ukwuu.
Emeghị m n'ezie tinye adreesị email m, mana ma eleghị anya ị ga-enweta m oge ọzọ 😉
Feb 22, 2016 n’elekere 9:39 nke abali
A nwara A / B nwalere ihuenyo mbido na-apụta mgbe onye ọrụ na-ahapụ weebụsaịtị? (Ihuenyo zuru oke dịka “Nnọọ ”tọ” ga-abụ “Ka ọ dị b
Ihe kpatara na anaghị m ahụ ihe kpatara onye ọrụ, na-erute weebụsaịtị gị maka oge 1 iji gụọ post, ga-etinye "ohere" ohere ịgụ akwụkwọ ahụ site na ịnye adress email ha ozugbo (ma enwere ike ibugharị ya na ndị ọzọ )) na-enweghị na-agụ mbụ post onwe ya mara ma ọ bụrụ na ya àgwà bụ n'ezie uru ịhapụ ya email adress…
Ọ bụrụ na ị mere ule A / B tupu oge ahụ, kedu ka ị ga-esi kọwaa na ndị mmadụ nwere ike ịdịkwu njikere ịhapụ adresị email ha tupu ị gụọ ọdịnaya gị kama ịgụchaa ọdịnaya gị?
Feb 22, 2016 na 4:39 PM
Na-akpali mmasị, Toni. Adịghị m ọkachamara na ntanetị weebụ n'ụzọ ọ bụla. Kedu ka ị ga - esi mejuputa mmejuputa ya ma ọ bụrụ na ha ahapụ saịtị ahụ? Site na mmapụta mgbe ha pịrị “x”?
Feb 23, 2016 na 3:45 PM
Hey Dean, a na-akpọ aghụghọ ahụ ọpụpụ ebumnuche, ọ bụ ihu ọma edemede na-ahụ oke pointer pointer ọsọ na nduzi. Ka mmadụ na-emegharị òké ahụ na bọtịnụ adreesị ma ọ bụ bọtịnụ azụ, a na-emepụta popup.